Dani Ceballos oo wadahadal la furay Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez – Gool FM
Dani Ceballos oo wadahadal la furay Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez
(London) 20 Okt 2019. Dani Ceballos ayaa la soo warinayaa inuu wadahadallo la furay Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez si uu ula sii joogo kooxda Arsenal.
Dani Ceballos ayaa mustaqbalkiisa kala hadlay madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez isku dayga uu ugu dhaqaaqayo heshiis joogto ah oo uu ugu biiri lahaa Arsenal, sida uu daabacay Wargeyska Daily Mail.
23-sano jirkaan ayaa soo jiitay indhaha caalamka tan iyo markii uu amaahda kaga yimid Spain, waxaana lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu si joogto ah uga mid noqdo kooxda Gunners sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Qandaraaskiisa bilowga ah ma haysto ikhtiyaar ah inuu si joogto ah ugu wareego Kooxda ka dhisan waqooyiga Magaalada London, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe la rajeynayo inuu ku laabto caasimada Spain dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Yeelkeede, waxa uu haatan wadahadal la bilaabay madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez si uu ugu qanciyo inuu si joogto ah uga mid noqdo kooxda reer England ee Arsenal.
Kooxda Chelsea oo ku dhow inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah xiddigaheeda